I-Methylprednisolone powder: Ukusetyenziswa, Isisombululo, Imiphumo emibi, Imbonakalo kunye nokunye
/Blog/Methylprednisolone/I-Methylprednisolone powder: Ukusetyenziswa, Isisombululo, Imiphumo emibi, Imbonakalo kunye nokunye
ezaposwa ngomhla 07 / 26 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Methylprednisolone.
Yonke into malunga neMethylprednisolone
I-2.Methylprednisolone yokusetyenziswa kwepowder
3.Methylprednisolone powder Isilinganisi
I-4.Methylprednisolone nemiphumo emibi
5.Methylprednisolone inokusebenzisana namanye amayeza
I-video ye-Methylprednisolone powder
I.Methylprednisolone powder Abalinganiswa basisiseko:
igama: I-Methylprednisolone powder
I-molecular Formula: C22H30O5
Isisindo somzimba: 374.47
Methylprednisolone, kuthengiswa phantsi kwegama elithi Depo-Medrol kunye neSolu-Medrol phakathi kwabanye, iilticticidyid medication ezisetyenziselwa ukukhusela isistim somzimba kunye nokunciphisa ukuvutha. Iimeko apho zisetyenziselwa ziquka izifo zesikhumba, izifo ezibangelwa yi-rheumatic disorders, i-inflamm, i-asthma, i-croup, i-COPD, i-Cancer, i-multiple sclerosis, kunye ne-add-on therapy ye-TB. Inikwa ngomlomo okanye ngejoyiki kwisisu okanye kumisipha.
I-Methylprednisolone (83-43-2) yonyango ye-corticosteroid evimbela ukukhululwa kwezinto ezisemzimbeni ezibangela ukuvuvukala.
I-Methylprednisolone isetyenziselwa ukunyanga iimeko ezininzi ezivuthayo ezifana ne-arthritis, i-lupus, i-psoriasis, i-ulcerative colitis, izifo eziphazamisayo, i-gland (endocrine) iingxaki kunye neemeko ezichaphazela ulusu, amehlo, imiphunga, isisu, isistim, okanye iiseli zegazi.
I-Formula ye-Molecular: C22H30O5
I-Melt Point: 244-246 ° C
Isitampu Sokugcina: Ukushisa kwamagumbi
Njengamaninzi e-adrenocortical steroids, i-methylprednisolone isetyenziselwa iziphumo zayo ezichasayo. Nangona kunjalo, i-glucocorticoids inemiphumo eyahlukileyo, kuquka ukutshintsha kwe-metabolism kunye nezimpendulo zokuzivikela. Uluhlu lweemeko zonyango olwenzelwe i-methylprednisolone lube lude, kwaye lufana nezinye i-corticosteroids ezifana ne-prednisolone. Ukusetyenziswa ngokuqhelekileyo kubandakanya unyango lwe-arthritis kunye nokunyangwa kwexesha elifutshane lokuqhaqhaqhazela okanye ukugqithiswa kwe-bronchitis ngenxa yezifo ezahlukeneyo zokuphefumula. Isetyenziswe kokubili kwonyango lwamaxesha anzima kunye nokulawula kwexesha elide lwezifo ezizimeleyo, ikakhulukazi i-lupus erythematosus yenkqubo. Kusetyenziswa kwakhona njengonyango lwe-sclerosis.
Eli seziyobisi lisetyenziselwa ukunyanga iimeko ezininzi. Inceda ukulawula ukuvuvukala nokuguqula iimpendulo zomzimba wakho. Iimeko ezisetyenziswa ekuphatheni ziquka:
iingxaki ze-endocrine ezifana nokungaqiniseki kokuqala kokusesikweni
izifo zesifo se-rheumatic ezifana ne-rheumatoid arthritis okanye i-psoriatic arthritis
izifo ze-collagen ezifana ne-lupus okanye i-systemic dermatomyositis
izifo zesikhumba ezifana ne-psoriasis okanye i-Stevens-Johnson syndrome
ukuxhatshazwa kanzima okungalawulwa ngonyango oluthile, olunjengeenkcukacha zonyaka okanye unyaka wonke okanye izimpembelelo zonyango kwiyeza
iingxaki zamehlo ezifana nokuvuvukala okanye izilonda (izilonda) kwiso lakho
iingxaki zesisu okanye emathunjini njengezilonda zesilonda okanye isifo sikaCrohn
iingxaki zokuphefumula ezifana nomonakalo wamaphaphu obangelwa yi-beryllium, okanye i-Loeffler's syndrome engalawulwa ngamanye unyango
ukuphazamiseka kwegazi njengamazinga aphantsi amaplatelet kubantu abadala, okanye ukungabikho kwamaseli obomvu kubantwana
izifo ze-neoplastic ezifana nomdlavuza wegazi okanye umdlavuza kwi-lymphatic system kubantu abadala
izifo, ezifana ne-trichinosis neengqondo okanye iingxaki zeentliziyo
3.I-Methylprednisolone powder Isilinganisi
Isisombululo seengxaki ze-endocrine
Imilinganiselo yokuqala yokulinganisa: 4-48 mg ngosuku ngosuku ethathwa kwisisindo esinye okanye ezimbini.
Inguqu yentsingiselo: Ukuba uyasabela kakuhle kwilisi, ugqirha wakho unokunciphisa isilingo sakho ngokukhawuleza uze ufike kwiqondo eliphantsi kakhulu elifanelekileyo.
Olunye unyango lwangosuku: Ukuba uya kuba kule nkunkuma ixesha elide, ugqirha wakho unokuthi uwathathe yonke imihla. Oku kunokunciphisa imiphumo emibi.
Umyinge wezingane (iminyaka eyi-0-17 iminyaka)
Udokotela wengane yakho uya kugqiba isilinganisi somntwana wakho ngokusekelwe kwimeko ephathwayo. Bamele banike umntwana wakho umlinganiselo ophantsi kakhulu.
Iintso zabantu abadala asebekhulile azinakusebenza kunye nazo. Oku kunokubangela ukuba umzimba wakho usebenze izidakamizwa ngokukhawuleza. Ngenxa yoko, ezininzi izilwanyana zihlala emzimbeni wakho ixesha elide. Oku kuphakamisa umngcipheko wemiphumo emibi. Ugqirha wakho angakuqala kwi-dose ephantsi okanye ishedyuli yeefayili ezahlukeneyo. Oku kunokukunceda ukugcina amanqanaba kwesi sidakamizwa ekwakheni kakhulu umzimba wakho.
Isisombululo seengxaki ze-rheumatic
Isistim sezifo ze-collagen
Isisifo sezifo zesikhumba
Isisombululo seengxaki zamehlo
Isistim sezifo zesisu
Isisiseko sezifo zokuphefumula
Isisombululo seengxaki zegazi
Isisombululo sesifo se-neoplastic
Isisombululo se-multiple sclerosis
Imilinganiselo yokuqala yokuqala: i-160 mg ngosuku eyenziwe ngethamo elilodwa okanye ezimbini.
Utshintsho lwenani: Emva kokuba uthathe i-160 mg ngosuku ngeveki ye-1, ugqirha wakho uya kunciphisa umyinge wakho kwi-64 mg ethatha yonke imihla enye ngenyanga.
4.Iziphumo zecala leMethylprednisolone
Fumana uncedo lwezonyango lwexakeka xa unemiqondiso yokuphendulwa komzimba kwi-methylprednisolone: ​​imihlathi; ukuphefumula okunzima; ukuvuvukala kobuso bakho, imilomo, ulwimi, okanye umqala.
ukuphefumula okufutshane (nangona kusebenza ngokukhawuleza), ukuvuvukala, inzuzo yokuzimela ngokukhawuleza;
ukutyumza, ukunqanda isikhumba, okanye nayiphina isilonda esingayi kuphulukisa;
umbono obonakalayo, umbono we-tunnel, intlungu yeso, okanye ukubona i-halos ezijikelezileyo izibane;
ukuxinezeleka okukhulu, utshintsho kubuntu, iingcinga ezingaqhelekanga okanye ukuziphatha;
intlungu entsha okanye engaqhelekanga kwingalo okanye ngomlenze okanye kumqolo wakho;
izithambiso zamanzi okanye iitars, ukukhwehlela igazi okanye ukuhlanza okubukeka njengeendawo zekhofi;
ukuthunjwa (ukuxinwa); okanye
i-cramps, iminyango, iintliziyo ezingekho phantsi kweentliziyo, ukuxubha esifuba sakho, ukwandisa ukoma okanye ukuvuthwa, ukugubha okanye ukugubha.
I-Steroids inokuchaphazela ukukhula kwabantwana. Tshela ugqirha wakho ukuba umntwana wakho akakhula kwisilinganiso esiqhelekileyo ngelixa usebenzisa le mayeza.
Iziphumo eziqhelekileyo zeemethylprednisolone zingabandakanya:
ukugcinwa kwamanzi (ukuvuvukala kwezandla okanye amaqhosha);
ubuhlungu okanye ububuthakathaka obunzima bomzimba; okanye
isisu esingathandekiyo, ukucima.
I-tablet ye-Methylprednisolone yomlomo ingasebenzisana namanye amayeza, iivithamini, okanye izityalo onokuzithatha. Intsebenziswano xa ixabiso litshintshe ngendlela eyenziwa yiziyobisi. Oku kunokuyingozi okanye ukuthintela ukuba isilwanyana singasebenzi kakuhle.
Ukukunceda ukuphepha ukusebenzisana, ugqirha wakho kufuneka alawule onke amayeza akho ngokucophelela. Qiniseka ukuxelela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza, iivithamini, okanye izityalo ozithathayo. Ukufumanisa ukuba le nkunkuma ingasebenzisana njani nantoni na into oyithathayo, xela ugqirha okanye umseli.
Iziyobisi akufanele usebenzise kunye ne-methylprednisolone
Musa ukuthatha la mayeza kunye ne-methylprednisolone. Xa zisetyenziswe nge-methylprednisolone, ezi ziyobisi zingenza iziphumo ezinobungozi emzimbeni. Imizekelo yalezi yobisi iquka:
Izigulane eziphilayo, ezifana nokugonya umkhuhlane we-nasal, igciwane le-varicella (inkukhupox), kunye nesifo sokuvotela, i-mumps, kunye ne-rubella (MMR): Musa ukufumana igciwane lokuphila ngelixa usebenzisa le nkunkuma. Isigulane esiphilayo sisifo esinobuthathaka sesifo. Isigodlo asiyi kukukhusela ngokugcwele kwizifo ngelixa uthatha i-methylprednisolone.
Ukusebenzisana okwandisa umngcipheko weempembelelo ezivela kwi-methylprednisolone
Ukuthatha i-methylprednisolone ngamachiza athile kuphakamisa umngcipheko weempembelelo ezivela kwi-methylprednisolone. Oku kungenxa yokuba inani le-methylprednisolone emzimbeni wakho linyuka. Imizekelo yalezi yobisi iquka:
I-Cyclosporine: Ezi ziyobisi zingabangela omnye ukuba aphule ngaphezulu. Unokuba nemiphumo emibini yecala kwi-methylprednisolone ukuba kukho ukuphazamiseka okungakumbi kwe-cyclosporine kune-methylprednisolone. Unokuba nemiphumo emibi ye-cyclosporine ukuba i-methylprednisolone ihlawule ngokukhawuleza kune-cyclosporine.
I-Troleandomycin kunye ne-ketoconazole: Ugqirha wakho unokutshintshela umlinganiselo wakho we-methylprednisolone ukuba uthathe nawaphi na amachiza. Bangakwenza oku ukugcina umzimba wakho ungavelisi i-steroids kakhulu.
Ukusebenzisana okwandisa umngcipheko weempembelelo ezivela kwezinye iziyobisi
Ukuthatha i-methylprednisolone ngamachiza athile kuphakamisa umngcipheko weempembelelo ezivela kulezi ziyobisi. Imizekelo yalezi yobisi iquka:
I-Aspirin: Ilungelo lakho leempembelelo ezivela kwi-aspirin landa xa uyeka ukuthatha i-methylprednisolone. Ukuba unengxaki yokucima igazi, cela udokotela wakho ukuba i-methylprednisolone ikhuselekile kuwe.
I-Warfarin kunye ne-heparin: Xa isetyenziswe nge-methylprednisolone, ezi ziyobisi zingenza igazi lakho libe lincinci kwaye lidale ukuphuma kwegazi. Okanye abanokusebenza kunye nokucutha igazi lakho. Ugqirha wakho kufuneka akujonge ngokukhawuleza ukuba uthatha nawaphi kwezi ziyobisi nge-methylprednisolone.
Ukusebenzisana okungenza ukuba iziyobisi zingasebenzi kakuhle
Xa i-methylprednisolone isetyenziswe ngamachiza athile, ayikwazi ukusebenza kunye nokunyanga imeko yakho. Oku kungenxa yokuba isixa semethylprednisolone emzimbeni wakho sinokuhla. Imizekelo yalezi yobisi iquka:
I-Phenobarbital, i-phenytoin, kunye ne-rifampin: Ugqirha wakho unokwandisa umlinganiselo wakho we-methylprednisolone xa uthatha naziphi na ezi ziyeza.
tags: ukuthenga i-Methylprednisolone powder, I-Methylprednisolone powder
Njani i-KML-29 isebenza njenge-inhibitor	I-Gestodene powder yokuthengisa: Izinto ze-10 ezaziyo malunga ne-Gestodene powder